कसरी गर्ने अन्तर्वार्ता फेस? जान्नुहोस् करिअर टिप्स - Everest Dainik - News from Nepal
कसरी गर्ने अन्तर्वार्ता फेस? जान्नुहोस् करिअर टिप्स
काठमाडौं, जेठ ६ । यदि तपाईं कुनै जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ र त्यसक्रममा अन्तर्वार्ता दिनुपर्ने छ भने पक्कै पनि नर्भस हुनु हुनेछ । सबै नै नर्भस हुन्छ । तर, अर्को तरिकाले सोच्ने हो भने यो अवसर पनि हो, जहाँ आफ्ना कुरा आकर्षक ढंगले दृढताका साथ प्रस्तुत गर्ने थलो पनि हो । तपाईंले अन्तर्वार्ता दिन जाने ठाउँका बारेमा केही अनुसन्धान गर्नुभयो र त्यसमा सोधिने प्रश्नहरूको केही अनुमान लगाउन सक्नुभयो भने अत्मविश्वास बढ्नेछ । जब आत्मविश्वास बढ्छ । निश्चय नै अन्तर्वार्ता आफूले सोचेभन्दा आकर्षक हुनेछ ।
याे पनि पढ्नुस लोकसेवा आयोगः लिखितमा छनाैट भएका उम्मेदवारलार्इ अन्तर्वार्तामा छनौट
याे पनि पढ्नुस ललितपुर महानगरका स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्छन्– सपना बाँडने होइन, काम गर्नेलाई भोट दिनुस्
याे पनि पढ्नुस कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५’ ल्याउने तयारी
अन्तर्वार्ता दिनेक्रममा अन्तर्वार्ताकारले तपाईसँग केही सक्कली कागजात माग गर्न सक्छ । त्यसैले त्यस जागिरका लागि चाहिने सबै कागजात बोकेर अन्तर्वार्तामा जानुपर्छ । ती कागजात नबोक्नु मूर्खता हुनेछ । यो सामग्री नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।